Himalaya Dainik » स्त्रीले यी ५ स्वभाव सुधारेपछि ‘स्वर्ग’ बन्छ घर !
स्त्रीले यी ५ स्वभाव सुधारेपछि ‘स्वर्ग’ बन्छ घर !
पतिलाई आफ्नो मात्रै ठान्ने-
पति आफ्नो मात्रै हो वा उसको अरुसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने महिलाले पुरुषको जीवनलाई सं’कटमा पारिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको स्वार्थी सोंच राख्ने महिलाले पुरुषको सार्वजनिक जीवन ध्व स्त पारिदिन्छन् । फलस्वरुपः हरेक पुरुष आफ्ना बाबु आमा, इष्टमित्र, साथीभाई तथा सहकर्मीबाट टाढा हुन बा ध्य हुन्छन‍् ।
नमिठो वचन बोल्ने-
वचनको वाण निकै घा’तक हुने गर्दछ । चर्को र कर्कस स्वरले सम्बन्धमा दरार पैदा गर्न भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । जीवनका हरेक पलहरु निकै आ घा’तपूर्ण हुने गर्दछन् । तर यसको ठीक विपरित, मीठो र भद्र वचन बोल्ने महिला जीवनसाथी बनेमा एउटा पुरुषको जीवन स्वर्ग समान बन्छ ।
पैसालाई मात्र महत्व दिने-
क’चकचे र रु ञ्चे-
सामान्य कुरामा पनि किचकिच गर्ने र रुञ्चे स्वभावका महिलाले पनि पुरुषको जीवनलाई नराम्रो अ’सर पारिरहेका हुन्छन् । दिनहुँको गनगन क चकच र गु’नासोले पुरुषको म’नोबल गिर्दै जान्छ । यस प्रकारको स्वभाव भएका महिलाले पुरुषलाई हौसला दिनुको साटो जीवनलाई निरा’श र कु ण्ठाग्रस्त बनाउँछन् ।
कुनै-कुनै महिलाले पुरुषले गरेका हरेक काममा ह स्तक्षेप गर्न मन पराउँछन् । यसरी हस्तक्षेप गर्दा आफूले जितेको महसुस गर्दछन् । तर यस्तो कार्यले पुरुषको जीवनको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई अलिकति पनि ख्याल हुदैन । अनि स्वतन्त्रताविनाको जीवन निरस हुने नै भयो ।